फोहोर व्यवस्थापन गर्न भरतपुर महानगरपालिका र दक्षिण कोरियासंग सम्झौता – Halkaro
फोहोर व्यवस्थापन गर्न भरतपुर महानगरपालिका र दक्षिण कोरियासंग सम्झौता
२ देखि ३ वर्षभित्र महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधान हुने प्रमुख दहालको दाबी
प्रकाशित मिति : २०७५, २९ भाद्र शुक्रबार September 15, 2018
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको लागि बिहिबार दक्षिण कोरिया कम्पनीसंग सम्झौता गरेको छ । महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा कोरियाको एक नम्बरमा पर्ने कम्पनी सुधोकवन ल्याण्डफिल साइड म्यानेज्मेन्ट कर्पोरेसन रिपब्लिक अफ कोरियासंग फोहोर व्यवस्थापनको लागि बिहिबार एम ओ यू सम्झौता गरेको हो।
भरतपुर महानगरको सम्पूर्ण फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि भरतपुर महानगरपालिका र रिपव्लिक अफ कोरियाबीच पाच वटा बुंदामा हस्ताक्षर भएको छ । बुदामा ल्याण्डफिल साइट निर्माणदेखि फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गर्नेसम्म उल्लेख गरिएको छ।
भरतपुर महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत कोरिया सरकारसंग प्रस्ताव गरिएको र त्यो प्रस्ताव बिहिबार स्वीकृत भएर सम्झौता पनि भएको प्रमुख दहालले बताउनुभयो । भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले अब फोहोर व्यवस्थापनको लागि डीपीआरको काम अघि बढ्ने बताउनुभयो।
महानगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न मास्टर्स प्लानको लागि यो सम्झौता भएको र अरु बाकी सम्झौता कामको सिलसिलामा हुदै जाने बताउनुभयो । महानगर प्रमुख दाहालले फोहोर व्यवस्थापन गर्न मास्टर्स प्लानको लागि मात्र ७ करोड सहयोग कोरिया सरकारबाट आएको बताउनुभयो।
२०१९ मार्च आगामी फागुनबाट डीपीआरको काम सुरु हुने र यो ठूलो योजना भएको हुनाले केही समय लाग्ने देखिएको महानगर प्रमुख दाहालले बताउनुभएको छ । १० देखि १५ महिनाभित्र मास्टर्स प्लान सक्ने लक्ष्य लिएको र त्यसपछि कोरियासंग अरु सम्झौता गर्दै महानगरलाई स्वच्छ, सफा, हरियाली सहरको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको उहाले बताउनुभयो।
कोरिया सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको योजना सुरुमा काठमाडौमा गर्ने भनिए पनि महानगरको पहलमा भरतपुरमा ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो । दाहालका अनुसार २ देखि ३ वर्षभित्र महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधान हुनेछ।
एम ओ यूमा हस्ताक्षरपछि रिपब्लिक अफ कोरियाका प्रेसिडेन्ट सियो जुओनले नेपालको फोहोर व्यवस्थापनमा कोरिया सरकारको चासो रहेको बताउनुभयो । प्रिसिडेन्ट सियो जुओनले भरतपुर महानगरको दुई पटक अध्ययन गरी बिहिबार सम्झौता गरेको बताउनुभयो । उहाँले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जानेको सीप नेपालको भरतपुर महानगरपालिकामा पनि खर्चने र अहिले २ करोड ५० लाख जनसंख्याको फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनुभयो।
उहाले भरतपुर महानगर र दक्षिण कोरियाको रिपब्लिक कम्पनी फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संगसंगै अघि बढ्ने र भरतपुर महानगरलाई सरसफाइयुक्त सहर बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले फोहोर व्यवस्थापनमा भएको यो सम्झौताले थप उर्जा मिलेको र स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई साकार पार्ने बताउनुभयो ।
← भरतपुर वितरण केन्द्रले विद्युत् चोरी गर्ने ३०२ जना कारवाही
थाकसको २२ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा डा. प्रमोद र डा. बिएमलाई सम्मान गरिने →